Ex Xildhibaan Sheekh C/Qaadir Cali Cumar oo diiday Doorasho oo goordhaw ka dhaceysa Cadaado | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ex Xildhibaan Sheekh C/Qaadir Cali Cumar oo diiday Doorasho oo goordhaw ka dhaceysa Cadaado
Wararka ka imaanaya magaalada Cadaado ee xarunta KMG ee maamulka Galmudug ayaa sheegaya in goordhaw lagu wado in Madaxtooyada maamulkaasi ay ka dhacdo Doorashada kursiga Beesha Heesow, Saleemaan.
Kursigan oo ahaa mid si weyn loo hadal hayay lana qorsheenayay in ay ku tartamaan Xildhibaan Sheekh Cabduqaadir Cali Cumar iyo Musharax Saabir Nuur Shuuriye oo ah Musharax ay taageereyso Kooxda Damul Jadiid iyo Villa Soomaaliya.
Sheekh C/Qaadir Cali Cumar ayaa gabi ahaan qaadacay in uu ka qeyb galo doorashada goordhaw ka dhaceysa Cadaado, waxa uuna Xildhibaanka sheegay in doorashadii la afduubtay lana doonayo in ay codeeyaan ergo been abuur ah oo qolo gaar ah xareesatay.
”Doorashadii kursiga beesheeda waa la afduubtay , mana ka qeyb galayo doorashadaasi afduubka ah ee la doonayo in ay codeeyaan ergo been abuur ah oo lasoo dhoo dhoobay, Ergadii saxda aheed ee soo qoreen Nabadoonada beesha Heesow banaanka ayaa looga tagay, waxaana boobkan gadaal ka riixaya Maamulka Galmudug iyo guddiga doorashada heer Galmudug” Ayuu yiri Xildhibaan C/Qaadir Cali.
Waxa uu sheegay Xildhibaan Sheekh C/Qaadir Cali Cumar in Nabadoonkii beesha la badalay laguna been abuurtay, waxa uuna intaa raaciyay in ergadii saxda aheed ee soo gudbiyeen Odayaasha beeshooda lagu badalay kuwa lasoo qortay oo guryo lagu xabistay.
”Waxaa layaab ah in Guddiga doorashada saakay isoo waceyn iina sheegeen in doorasho dhaceyso maanta oo Jimco ah iyada oon la xareyn lana sawirin ergadii wax dooran laheyd, waxaan u sheegayaa Umada Soomaaliyeed in doorashadaasi aanan ka qeyb galin , waxaana ka digayaa in magaceyga lagu been abuurto loona sheego umada in aan tartamay” Ayuu yiri Sheekh C/qaadir Cali Cumar.